Alpine Linux 3.11 inosvika nerutsigiro rwekutanga rweGnome neKDE | Linux Vakapindwa muropa
Alpine Linux 3.11 inosvika nerutsigiro rwekutanga rweGnome neKDE
Alpine Linux iko kugovera kwakareruka Linux yakanangidzirwa kuchengetedzeka, uyeKugoverwa uku zvichibva pa musl uye BusyBox, , que ine chinangwa chekureruka uye kuchengetedzeka nekukanganisa apo ichiri kubatsira kune zvakajairika chinangwa mabasa. Izvi zvinoita kuti zvidiki uye zviwanikwa zvine hunyanzvi kupfuura zvakagoverwa zveLinux. Mudziyo haudi zvinopfuura masere masere, uye kumisikidza padiki dhisiki kunoda ingangoita 8MB yekuchengetedza.
Nezvo iwe haungogone chete kuwana zvizere zvakazara nharaunda yeLinux asi hombe sarudzo yeakagadzirira-kushandisa-mapakeji. Iwo mapakeji epamberi anoderedzwa uye akapatsanurwa, kukupa iwe kunyanya kutonga pamusoro pezvaunoisa, izvo zvinochengetedza nharaunda yako kunge diki uye inoshanda sezvinobvira.
With izvi kugovera kunotora mashandiro uye kuchengetedzeka mukutarisa, saka zvakapihwa tarisiro yayo kugovera uku inotipawo mifananidzo ye system yako kuitira kuti igone kushandiswa kunyangwe mumakomputa madiki nemidziyo ARM.
Naizvozvo uku kugovera inogona kuiswa paRaspberry Pi, Yayo yandakatogovana mamwe masisitimu pano pane blog yeichi chikuru chishandiso.
Iyo yekugovera kit ine yakanyanya kuchengetedzwa zvinodiwa uye inovakwa neSSP (Stack Smashing Dziviriro) dziviriro. OpenRC inoshandiswa senge yekutanga system, yayo pacheji maneja apk inoshandiswa kugadzirisa mapakeji.
1 Nezve iyo nyowani vhezheni yeAlpine Linux 3.11
2 Alpine Linux 3.11 kurodha pasi
3 Maitiro ekuisa Alpine Linux pane Raspberry Pi?
Nezve iyo nyowani vhezheni yeAlpine Linux 3.11
Iyi vhezheni itsva ye Alpine Linux 3.11 inosvika iine mashoma maficha manyowani, saka kuburitswa kutsva uku kunongori sosi yekugadzirisa kuti ipe mapakeji azvino nekudaro kudzivirira mushandisi kutora mazana emamwe MB.
Yenyaya dzakatanhamara yeAlpine Linux 3.11 ndeyekuti Pakutanga rutsigiro rwakawedzerwa iyo distro yekubatanidza mamiriro eGnome uye KDE desktop maari. Naizvozvi, vashandisi vanozokwanisa kushandisa chero enzvimbo mbiri idzi kana iyo yakawanikwa nekutadza isiri yekuda kwavo.
Pamusoro pekutsigira nharaunda dze desktop, iko kuwedzerwa kwekutsigirwa kweVulkan graphical API uye iyo DXVK dhairekitori zvakare yakasimbiswa neDirect3D 10/11 kuitiswa paVulkan, inozovandudza mashandisiro emifananidzo pane kugovera.
Panguva yechikamu chekuvandudzwa, Iwo maBhaibheri matsva anomira pachena: Linux kernel 5.4, GCC 9.2.0, Busybox 1.31.1, musl libc 1.1.24, LLVM 9.0.0, Go 1.13.4, Python 3.8.0, Perl 5.30.1, Postgresql 12.1, Rust 1.39.0, Cristal 0.31.1, Erlang 22.1, Zabbix 4.4.3 Nextcloud 17.0.2, Git 2.24.1, Xen 4.13.0, Qemu 4.2.0.
Yeimwe shanduko izvo zvinosanganiswa mune iyi nyowani vhezheni yesystem, tinogona kuwana:
Rust compiler kuwanikwa kwezvivakwa zvese kusara s390x.
Tsigiro yeiyo itsva Raspberry Pi 4 (inovakira aarch64 uye armv7).
Alpine Linux 3.11 kurodha pasi
Kana iwe uchida kudhawunirodha iyi nyowani Alpine Linux yekuvandudza, iwe unofanirwa kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti kwaunogona kuwana mufananidzo wegadziriro zvinoenderana nekuvakwa kwemidziyo kwaunoshandisa iko.
Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti kugovera uku kune mufananidzo wekushandisa pane Raspberry Pi.
Kubatana kwe kurodha ndeichi.
Maitiro ekuisa Alpine Linux pane Raspberry Pi?
Kana iwe ukaronga kushandisa ino sisitimu pane yako diki homwe komputa, iwe unogona kuzviita nekutevera iyi mirairo pazasi.
Waita kurodha pasi isu tinofanirwa fomati yedu SD kadhi, tinogona kutsigira Gparted, kadhi re SD rinofanira kunge riri mufat32 fomati.
Waita izvi isu ikozvino tinofanirwa kuchengetedza mufananidzo weAlpine Linux 3.11 mune yedu SD, Kune izvi isu tinongofanirwa kuvhura iyo faira iyo ine maAlpine mafaera.
Kamwe kurodha pasi kwaitwa, isu tinofanirwa chete teedzera zvirimo mukati medu SD kadhi.
Pakupera chete isu tinofanirwa kuisa iyo SD kadhi mune yedu Raspberry Pi uye ibatanidze iyo kune simba uye iyo system inofanira kutanga kumhanya.
Isu tichaona izvi nekuti green green LED inofanira kubwaira ichiratidza kuti yaiziva system.
Uye takagadzirira nayo tinogona kutanga kushandisa Alpine Linux pane yedu Raspberry Pi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Alpine Linux 3.11 inosvika nerutsigiro rwekutanga rweGnome neKDE
NetHack, mutambo uyo wakagadziridzwa kwemakore makumi matatu nemaviri
Mushure mekushandurwa kutsva kwebrowser, Google inotangisa Chrome OS 79 ine multimedia zvinodzora pakiyi skrini